Ilhaan Cumar oo madaxweyne Donald Trump Shaah Soomaali ku marti qaaday -
Ilhaan Cumar oo madaxweyne Donald Trump Shaah Soomaali ku marti qaaday
Ilhaan Cumar oo ka tirsan Xildhibaada Dalka Maraykanka, gaar ahaan xildhibaanada ka arrimiya gobolka Minnesota ayaa madaxweyne dalka Mareykanka ee Donald Trump ku marti qaaday Shaah Soomaali.
Wareysi dhinacyo baddan taabanaya oo uu xiriiriyaha barnaamijka “Daily Show” ee Trevor Noah uu maalintii Khamiista, 7/13/2017 la yeeshay Ilhaan Cumar ayeey xildhibaan Ilhan ku sheegtay in ay laba jeer oo hore marti qaad u fidisay madaxweyne Donald Trump.
Xildhibaan Ilhaan Cumar oo laga wareystay guushii iyo doorashadii taariikhiga ahayd ee ay sannadkii hore soo hoysay, ayaa waxaa kale oo su’aalihii la weydiiyey kamid ahaa qaxii, qaxootinimadii iyo waliba qaabka ay qoyskeedu iyo dhamaan dadka qaxootiga ah ee soo gala wadanka Mareykanka ay soo maraan.
Sidoo kale waxaa xildhbaan Ilhaan Cumar la weydiiyey su’aalo ku saabsan madaxweyanaha dalka Mareykanka ee Donald Trump. Haddaba Xildhibaan Ilhan Omar ayaa xiriiriyaha barnaamijka “Daily Show” ee Trevor Noah u sheegtay in ay aabaheed iyo awoowgeed ay u sheegeen in qofkii cadawgaaga ah la soo dhaweysto, gurigaagana lagu marti qaado, sidaas daraadeedna ay madaxweyne Donald Trump ku marti qaadayso in uu shaah Soomaali la cabo, maadama uu fikrado khaldan ka aaminsanyahay dadka Soomaaliyeed ee iyagu ku dhaqan gobolka Minnesota.
Ilhaan Cumar ayaa bishii November ee sannadkii la soo dhaafay noqotay gabadhii ugu horreysay oo Muslim, muhaajir Mareykan ah oo noqota xildhibaan Aqalka Wakiilada dalka Mareykanka.
Kor ka daawo wareysigii lala yeeshay xildhibaan Ilhaan Cumar.
Xigashadda Sawirka iyo video-ga: Daily Show
Related Items:Community, Featured, Somali community, Somali immigrants, Somali Minneapolis, U.S Election
Wiil 17 jir ah ayaa xalay lagu dilay magaalada Fridley